यस क्लबले यही वर्ष २०७३ देखि सेन्ट जेभियर्स साहित्य पुरस्कारको स्थापना गरेको छ ।
१) के हो सेन्ट जेभियर्स साहित्य पुरस्कार ?
सेन्ट जेभियर्स साहित्य पुरस्कार सेन्ट जेभियर्स कलेजले प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट रचनालाई दिने प्रतिष्ठित पुरस्कार हो ।
२) पुरस्कारको नगद राशी कति हुन्छ ?
पुरस्कारको नगद राशी रु.५/५ हजार ( नेपाली र अङ्ग्रेजी ) हुन्छ ।
३) रचना कथा, कविता, निबन्ध के हुनुपर्छ ?
क्लबले प्रत्येक वर्षलाई कुनै एक साहित्यिक विधाको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । जस्तै वर्ष २०७३ कविता वर्ष हो । यस बर्षभरी लेखकलाई कविता पठाउन आवहान गरिन्छ । कविता गद्य वा पद्य कुनै एक शौलीमा लेख्न सकिन्छ ।
४) रचना कसरी पठाउने ?
रचना पठाउन sxc.literary@gmail.com मार्फत् वा क्लब व्यवस्थापन सभापतिलाई बुझाउन सकिन्छ ।
५) रचना अङ्ग्रेजी / नेपाली कुन माध्यममा हनुपर्छ ?
रचना नेपाली वा अङ्ग्रेजी कुनै माध्यममा लेखेर पठाउन सकिन्छ ।
६) रचना को – कसले पठाउन पाउछ ?
सेन्ट जेभियर्स कलेज माइतिघरमा कुनै पनि विषय लिई अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पठाउन सक्छ ।
७) रचना छनोट गर्ने आधार के – के हुन् ?
यस क्लबको छनोट समूहले योग्य रचना छनोट गर्दछ । छनोट समूहमा लामो समयसम्म नेपाली / अङ्ग्रेजी विषय अध्यापन गराउने शिक्षकवर्ग रहन्छन् । छनोटमा परेका रचना यही साइटमा प्रकाशित हुन्छन् । यसरी प्रकाशित रचनामध्ये केही मनोनयनमा राखिन्छ र साहित्य पुरस्कार वितरणका दिन आमन्त्रित विशिष्ट साहित्यिक अतिथिवर्गबाट एक उत्कृष्ट रचना छानिन्छ ।
८) पुरस्कार वितरण कहिले हुन्छ ?
हरेक वर्ष कवि गोष्ठी कार्यक्रमका दिन उक्त पुरस्कार प्रदान गरिने छ ।